वामदेव डोल्पाबाट चुनाव लड्ने, प्रधानमन्त्री ओलीले लिए जीतको जिम्मा ! – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/वामदेव डोल्पाबाट चुनाव लड्ने, प्रधानमन्त्री ओलीले लिए जीतको जिम्मा !
काठमाडौं, १५ भदौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई संसदको यही कार्यकालमा सांसद बनाउनेगरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तयारी गरेका छन् । गौतमले राष्ट्रियसभामा नआउने बताएपछि ओलीले अहिलेका एक सांसदलाई राजीनामा दिन लगाएर भएपनि उक्त क्षेत्रमा चुनाव लडाएर संसदमा ल्याउन चाहेका छन् । स्रोतकाअनुसार ओलीले वामदेवलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउने र आगामी चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न दिनेसम्मको योजना बनाएका छन् ।
गौतम प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दिया-१ बाट कांग्रेस नेता सञ्जयकुमार गौतमसँग पराजित भएका थिए । उनलाई संसद्मा ल्याउन नेकपा अध्यक्षद्धय ओली र दाहालले पूनः एकपटक गृहकार्य सुरु गरेका छन् । हुन त वामदेवको लागि यसअघि नै सांसद बुढाले राजीनामा दिएर बाटो खोल्न आफू तयार रहेको सन्देश दिएका थिए । ओलीले चुनाव लड्न तयार हुन गौतमलाई भनेका छन र चुनाव जिताउने जिम्मा आफूले लिने बताएको स्रोतको दाबी छ । File Photo
रबि लामिछाने भोलि देखि हरेक दिन १२ घन्टा दुखी पीडित हरुको समस्या समाधान गर्न फिल्डमा जाने । यस्तो छ सम्पर्क नम्बर हरु